Ukufezekiswa kukaRoosevelt kwongezwe ngaphaya kobuongameli.
U-Theodore Roosevelt wayengumongameli wama-26 wase-United States, enyukela e-ofisi emva kokubulawa kukaMongameli uWilliam McKinley ngo-1901. Ngo-42, u-Theodore Roosevelt waba ngumongameli omncinci kwimbali yesizwe waza wanyulwa kwikota yesibini. Unamandla kumntu kwaye wagcwaliswa ngentshiseko nangamandla, uRoosevelt wayengaphezulu kwezopolitiko ophumelelayo. Kwakhona wayengumlobi ophumeleleyo, ijoni elingenangqondo kunye neqhawe lemfazwe , kunye nomntu ozinikeleyo wendalo.
Kucingwa ngababhali-mlando abaninzi ukuba babe ngabongameli bethu abakhulu, uTheodore Roosevelt ungomnye wezine apho ubuso bakhe buboniswe kwiNtaba uRushmore. UTheodore Roosevelt wayengumalume ka- Eleanor Roosevelt kunye nomzala wesihlanu womongameli wama-32 wase-United States, uFranklin D. Roosevelt .
Imihla: Oktobha 27, 1858 -Januwari 6, 1919
Ixesha leMongameli : 1901-1909
Kwaziwa nangokuthi: "Teddy," TR, "I-Rough Rider," I-Old Lion, "" Trust Trust "
I-Quote eyaziwayo: "Thetha ngokukhawuleza kwaye uthwale intonga enkulu-uya kuhamba kude."
UTheodore Roosevelt wazalwa ngowesibili kwabantwana abane ku-Theodore Roosevelt, uSr. noMarta Bulloch Roosevelt ngo-Oktobha 27, 1858 eNew York City. Ehla ukusuka kwi-17 yekhulu le-17 leminyaka yamaDatshi elalifudukela kwintengiso, umdala uRoodvelt naye wayenobuchule bokungenisa iglasi.
UTheodore, owaziwa ngokuba ngu "Teedie" kwintsapho yakhe, wayengumntwana ogulayo ngokugqithiseleyo ophethwe yi-asthma enzima kunye neengxaki zokugaya ubuncinane bakhe bonke abantwana.
Njengoko wayekhulile, uTheodore waqala ukuba ne-asthma encinci. Wakhuthazwa nguyise, wasebenza ukuze abe namandla ngakumbi ngokomzimba kwi-hiking, boxing, kunye nokunyusa.
U-Young Theodore wavelisa ukuthanda isayensi yemvelo esemncinci kwaye waqokelela iimpawu zezilwanyana ezahlukeneyo.
Wabhekisela kwingqokelela yakhe ngokuthi "Imyuziyam yaseRoosevelt yeMbali yeNdalo."
Ubomi e Harvard
Ngowe-1876, eneminyaka eyi-18 ubudala, uRovelvelt wangena kwiYunivesithi yaseHarvard, apho wakhawuleza wafumana idumela elincinci elincinci elinesigxobhozo kunye nesimo sokuthetha rhoqo. U-Roosevelt wayeza kuphazamisa iintetho zabafundisi, ahlasele uluvo lwakhe ngelizwi eliye lachazwa njengesigxina esiphezulu.
URovelvelt wayehlala kwikampu ekwakhe udadewabo omdala uBamie amkhethile waza wamlungiselela. Apho, waqhubeka nokufundisisa izilwanyana, ukuhlala kunye neenyoka eziphilayo, iilzards, kunye ne-tortoise enkulu. URoosevelt waqala ukusebenza kwincwadi yakhe yokuqala, iNavy War ye-1812 .
Ngexesha leeholide yeKrisimesi ka-1877, uTheodore Sr. wagula kakhulu. Kamva wafumanisa ukuba unomdlavuza wesisu, wafa ngoFebruwari 9, 1878. Omncinane uTheodore waphazamiseka ngenxa yokulahlekelwa ngumntu ayemthanda kakhulu.
Umtshato ku-Alice Lee
Ekubeni kwe-1879, ngelixa ehambela ikhaya lomnye wabahlobo bakhe beekholeji, uRoosevelt wadibana no-Alice Lee, intombazana ebhinqa evela kwintsapho yaseBoston ecebileyo. Wamsulwa ngokukhawuleza. Baye baxhamla umnyaka kwaye bahlanganyela ngoJanuwari 1880.
URovelvelt waphumelela kwiHarvard ngoJuni 1880.
Wangena e-Columbia Law School kwisixeko saseNew York ekuwa, ecinga ukuba indoda esatshatileyo kufuneka ibe nemisebenzi ehloniphekileyo.
Ngo-Oktobha 27, ngo-1880, u-Alice noTheodore batshata. Kwakuyiminyaka engama-22 yokuzalwa kukaRoosevelt; UAlice wayeneminyaka eli-19 ubudala. Bahamba kunye nomama kaRoosevelt eManhattan, njengoko abazali baka-Alice babenqume ukuba benze.
Ngokukhawuleza uRovelvelt wadinwa nezifundo zakhe zomthetho. Wafumana ukubiza okumthanda kuye ngaphezu kwezopolitiko-mthetho.
Ukhethiweyo kwiNdibano Yombuso waseNew York
URovelvelt waqala ukuya kwiintlanganiso zengingqi yePublic Republic Party ngenkathi esesikolweni. Xa kwakusondelelwa iinkokheli zeqela-ezazikholelwa ukuba igama lakhe elidumileyo lingamnceda ukuba anqobe-uRoosevelt wavuma ukuba asebenzele kwiNdibano yeNorhulumente YaseNew York ngo-1881. URovelvelt oneminyaka engamashumi amabini anesithathu ubudala wabamba iqela lakhe lokuqala lopolitiko, waba ngumntu omncinci ukhe wakhethwa ukuba kwiNdibano Yombuso waseNew York.
Ngokuxhalabile, uRoosevelt waphumela kwindawo yesebe e-Albany. Abaninzi bamabandla abanobuhle bamhlekisa ngenxa yesambatho sakhe esihlambulukileyo kunye nesigxina esiphezulu seklasi. Bayihlekisa uRoosevelt, ebhekisela kuye ngokuthi "isikhulu esincinane," "ubukhosi bakhe," okanye "nje isidenge."
URovelvelt wakhawuleza wazisa igama lokuba ngumguquleli, ukuxhasa iindleko eziza kuphucula imeko yokusebenza kwiifekthi. Ukunyulwa kwakhona kunyaka olandelayo, uRovelvelt wamiselwa nguGavana uGrover Cleveland ukuba aphethe ikhomishini entsha kwinkqubo yokulungiswa kwenkonzo yoluntu.
Ngowe-1882, incwadi kaRoosevelt, i -War Naval ye-1812 , yanyatheliswa, ifumana indumiso ephakamileyo yokufundiswa kwayo. (URoosevelt uya kuqhubeka ukupapasha iincwadi ezingama-45 ebomini bakhe, kubandakanywa iincwadi ezilandelelweyo, iincwadi zembali kunye neengcamango.
Ehlotyeni ka-1883, uRovelvelt nomkakhe bathenga umhlaba e-Oyster Bay, eLong Island eNew York baza benza izicwangciso zokwakha ikhaya elitsha. Bafumanisa ukuba u-Alice ukhulelwe umntwana wabo wokuqala.
Ngomhla kaFebruwari 12, 1884, uRoosevelt, waseAlbany, wathola ilizwi lokuba umfazi wakhe wayedlulisela intombazana enempilo eNew York City. Wayevuya gqitha ngeendaba, kodwa wafunda ngolandelayo ukuba u-Alice wayegula. Wakhawuleza wakhwela isitimela.
URovelvelt wabingelwa emnyango ngumntakwabo u-Elliott, owamxelela ukuba kungekhona nje ukuba umfazi wakhe uyafa, unina naye wayenjalo. URovelvelt wayemangaliswe ngaphezu kwamagama.
Unina, ehlanjelwa ngumkhuhlane we-typhoid, wafa kusasa ekuseni kaFebhuwari 14. U-Alice, obethathwe ngesifo sikaBright, isifo sesifo, wasweleka kamva ngaloo mini. Usana lwaqanjwa ngokuthi nguAmai Lee Roosevelt, ngokuhlonipha unina.
Egqithiswe intlungu, uRoosevelt wamphatha indlela kuphela eyazi ngayo-ngokuzifihla emsebenzini wakhe. Xa ixesha lakhe kwindibano ligqityiwe, wasuka eNew York waya kwi-Dakota Territory, ezimisele ukwenza ubomi njengeenkomo.
U-Alice omncinane wasala ekunyamekeleni udadewabo kaRosevelt uBamie.
Roosevelt eWest West
Iziglasi ze-Sporting pince-nez kunye ne-upper class-Coast Coast, u-Roosevelt akazange abonakale ehlala kwindawo enqabileyo njengeDatota Territory. Kodwa abo bamngabaza baya kuqonda ukuba uTheodore Roosevelt wayezibamba.
Amabali awaziwayo ngexesha lakhe kwi-Dakotas ibonisa ukuba ngumlingani weqiniso kaRoosevelt. Kwesinye isihlandlo, i-barroom-inxila-inxila kwaye imisa ibhotile elayishiwe kwisandla ngasinye esabizwa nguRoosevelt "amehlo amane." Ukumangaliswa kwabameli, uRoosevelt-owayengumgcini webhokisi-wayese-slugged loo ndoda ehlathini, emnquba phantsi.
Elinye ibali libandakanya ukwebiwa kwesinqanawa esincinci sikaRoosevelt. Isikhephe sasingafanelekanga, kodwa uRoosevelt wagxininisa ukuba amasela athathwe ngokusemthethweni. Nangona kwakungowokufa ebusika, uRoosevelt kunye namaqabane akhe balandela abo bantu babini kwiTereji yaseNdiya baza bababuyisa ebusweni.
URovelvelt wahlala eNtshonalanga malunga nemibini emibini, kodwa emva kobusika obunzima obunzima, walahlekelwa yinkomo enkulu, kunye notyalo lwakhe.
Wabuyela eNew York ukuba aphile kakuhle ehlobo le-1886. Ngoxa uRovelvelt wayekho, udadewabo uBamie wayejongene nokwakhiwa kwekhaya lakhe elitsha.
Umtshato ku-Edith Carow
Ngethuba lexesha likaRoosevelt eWest, wayethabathe uhambo lwaseMpumalanga ukuya kwintsapho. Ngethuba lezo zihlandlo, waqala ukubona umngane wakhe wabantwana, u-Edith Kermit Carow. Baye bahlanganyela ngoNovemba 1885.
U-Edith Carow kunye noTheodore Roosevelt batshata ngoDisemba 2, 1886. Wayeneminyaka engama-28 ubudala, kunye noEdith babengama-25. Bathuthela emzini wabo osandul 'ukwakhiwa eOyster Bay, apho uRoosevelt wayesifake "iSagamore Hill." UAkena omncinane waza kuhlala noyise kunye nomfazi wakhe omtsha.
NgoSeptemba 1887, u-Edith wazala uTheodore, uJr., owokuqala wabantwana abathathu abatshatileyo. Walandelwa nguKermit ngo-1889, uEthel ngo-1891, u-Archie ngo-1894, no-Quentin ngo-1897.
Ukulandela ukhetho luka-1888 loMongameli waseRiphabliki uBenjamin Harrison, uRoosevelt wamiselwa njengomkomishinala weNkonzo kaRhulumente. Wathuthela eWashington DC ngoMeyi 1889. URoosevelt wabamba isikhundla seminyaka emithandathu, ebizwa ngokuba ngumntu onyanisekileyo.
URovelvelt wabuyela kwisixeko saseNew York ngo-1895, xa wamiselwa ikhomishana yamapolisa wesixeko. Apho, wachaza imfazwe enkohlakalo kwiSebe lePolisa, ukukhwela inkulu yamapolisa, phakathi kwabanye. URovelvelt wathatha isinyathelo esingavamile sokuhamba ngezitrato ebusuku ukuze azibonele ukuba ngabapolisi bakhe babeqhuba imisebenzi yabo. Wayedla ngokuzisa ilungu le-press kunye naye ukumbhala iindwendwe zakhe. (Oku kubonakaliswe ukuqala kobudlelwane obuhle kunye nolu catshulwa ukuthi uRoosevelt wayegcinwe-abanye babethetha kakubi-kubomi bakhe bonke.)
Ngomnyaka we-1896, uMongameli waseRephablikhi owayesandula ukhetho uWilliam McKinley wamisela unobhala onguNcedisi woMkhosi weRoosevelt. Amadoda amabini ahluke kwiimbono zabo kwiimeko zangaphandle. URovelvelt, ngokungafani noMcKinley, wayemthanda umgaqo-nkqubo welizwe langaphandle. Ngokukhawuleza wathatha isizathu sokunyusa nokuqinisa i-US Navy.
Ngowe-1898, isizwe esiqithi saseCuba, i-Spanish possession, yayingummangaliso wokuvukela umbuso waseSpain. Iingxelo zachaza izibhamu ngabavukeli e-Havana, imeko ebonwa njengengozi kubemi baseMelika kunye namashishini aseCuba.
Ekhuthazwa nguRoosevelt, uMongameli McKinley wathumela i- Maine e-Havana ngoJanuwari 1898 njengokhuselo lweMelika. Ukulandela ukuqhuma okukrokrelayo kwinqanawa emva kwenyanga, apho ama-25 aseMelika abulawa, uMcKinley wabuza iCongress ukuba ibhengeze imfazwe ngo-Ephreli 1898.
Imfazwe yaseSpain-American kunye neR TR Riders
URovelvelt, owathi, eneminyaka engama-39 wayelinde ubomi bakhe bonke ukuba ahlanganyele ekulweni, wuleza ngokukhawuleza isikhundla sakhe njengomncedisi unobhala weNavy. Wazimelela ukuba uthunyelwe njengomloli-mkholwane kumkhosi wamavolontiya, ebizwa ngokuba yi-Rough Riders.
La madoda awela eCuba ngoJuni 1898, kwaye ngokukhawuleza ahlaselwa yilahleko njengoko bexabene nemikhosi yaseSpain. Ukuhamba ngeenyawo kunye nangamahashe, iRough Riders yanceda ukuthatha iKettle Hill neSan Juan Hill . Ezi zombini iindleko zaphumelela ekubalekeni kweSpeyin, kunye ne-US Navy yagqiba umsebenzi ngokutshabalalisa iinqanawa zaseSpain eSantiago ngasezantsi eCuba ngoJulayi.
Ukususela kwiGosa likaGosa ukuya kwiNqununu kaMongameli
Imfazwe yaseSpain-Amerika yayingasiswanga kuphela iUnited States njengegunya lehlabathi; Kwakwenziwe uRoosevelt iqhawe lesizwe. Xa ebuyela eNew York, wakhethwa njengomtyunjwa weRiphabhliki kwi-rhu lumente yaseNew York. URovelvelt wanqoba ukhetho lwama-gubernatorial ngo-1899 eneminyaka engama-40.
Njengothuluneli, uRoosevelt wabeka izinto zakhe ekuhlaziyeni izenzo zoshishino, ukwenza umthetho okhuseleyo wemisebenzi yoluntu kunye nokukhuselwa kwamahlathi aseburhulumenteni.
Nangona wayedume kakhulu ngabavoti, abathile bezopolitiko babenomdla wokufumana u-Roosevelt owayengumngcipheko ephuma kwindlu yombutho. I-Republican Senator uThomas Platt yavela ngesicwangciso sokukhupha uRurban Roosevelt. Uqinisekisile uMongameli McKinley, owayesebenza ngokukhetha ukhetho kwakhona (kunye nommeli wakhe umongameli wasweleka kwiofisi) ukuba akhethe uRoosevelt njengeqabane lakhe elikhethiweyo kunyaka-1900. Emva kokunganiseki-ukwesaba wayengayi kuba nomsebenzi wangempela ukwenza njengomphathi-mongameli-Roosevelt wamkela.
Ithekiti likaMcKinley-Roosevelt ludwendwe ngokukhawuleza ngo-1900.
Ukubulawa kukaMcKinley; URovelvelt uba nguMongameli
URovelvelt wayekade e-ofisi emva kweenyanga ezintandathu xa uMongameli McKinley wadutshulwa ngu-Leon Czolgosz ngo-Septemba 5, 1901 eBuffalo, eNew York. UMcKinley unqabile amanxeba wakhe ngoSeptemba 14. URoosevelt wabizwa eBuffalo, apho wathabatha isifungo seofisi ngaloo mini. Ngeminyaka engama-42 ubudala, uTheodore Roosevelt waba ngumongameli omncinci kwimbali yaseMelika .
Ekhumbula ingxaki yokuzinza, uRoosevelt wagcina iCommunicipal council of McKinley. Nangona kunjalo, uTheodore Roosevelt wayeza kubeka isitampu sakhe phezu koongameli. Waxininisa uluntu kufuneka lukhuselwe kwimisebenzi yezoshishino. URovelvelt wayechasene ngokukhethekileyo nokuthi "amathemba," amashishini awazange avumele ukhuphiswano, ngoko ke banako ukuhlawula nayiphi na into abakhethayo.
Nangona ukuhamba kwe-Sherman Anti-Trust Act ngo-1890, abaongameli bengaphambili babengenzi nto ibalulekileyo ekunyanzeleni isenzo. URovelvelt wawunyanzelisa, ngokumangalela iNkampani ye-Securities Inkampani-eyayiqhutywa ngu-JP Morgan kwaye yayilawula imizila emithathu yomzila-ngokuphula umthetho weSherman. INkundla ePhakamileyo yase-US kamva yagweba ukuba inkampani yayiye yaphula umthetho, kwaye i-monopoly yachithwa.
URoosevelt wada wathabatha imboni yamalahle ngoMeyi 1902 xa abavukuzi baseCentral basePennsylvania behamba. Isiteyibrari sidonsa kwiinyanga eziliqela, nabanini bam bamanqaba ukuthetha. Njengoko uhlanga lwalujongene nethemba lokubanda ebusika ngaphandle kwamalahle ukugcina abantu befudumele, uRoosevelt wangenelela. Watshitshisa ukuba angenise kwimikhosi yamagunya ekusebenziseni iimigodi zamalahle xa i-settlement ayifumanekanga. Ejongene nesongelo esinjalo, abanikazi bam bam bavuma ukuxoxisana.
Ukuze ulawulo lwamashishini kwaye uncede ukukhusela ukusetyenziswa kakubi kwamandla ngamashishini amakhulu, uRoosevelt wadala iSebe lezoRhwebo kunye neMisebenzi ngo-1903.
U-Theodore Roosevelt uphinde uxanduva lokutshintsha igama elithi "indlu yokulawula" "kwiNdlu eNtshonalanga" ngokusayina umyalelo olawulayo ngo-1902 owawushintsha ngokusemthethweni igama lokwakha izakhiwo.
I-Square Deal ne-Conservationism
Ngethuba lakhe lokukhankanya ukhetho, uTheodore Roosevelt wabonisa ukuzibophezela kwakhe kwisikhundla esibizwa ngokuba yi "Square Deal." Eli qela leenkqubela phambili ezijoliswe ekuphuculeni ubomi babo bonke abantu baseMerika ngeendlela ezintathu: ukunciphisa amandla ezinkampani ezinkulu, ukukhusela abathengi kwimveliso engaphephile, nokukhuthaza ukulondolozwa kwemithombo yendalo. URovelvelt uphumelele kule mimandla, ukususela kwimithetho yakhe yokutya ethembekileyo nokukhuselekileyo ekubandakanyekeni kwakhe ekukhuseleni imo.
Ngexesha apho iimithombo zendalo zatshatyalaliswa ngaphandle kokulondoloza ulondolozo, uRoosevelt wandila i-alamu. Ngomnyaka we-1905, wadala i-US Forest Service, eya kusebenzisa iingozi zokulawula ihlathi lelizwe. I-Roosevelt nayo yakha iipaki ezizwe ezihlanu, ii-51 zasendle zasendle kunye nezikhumbuzo zelizwe ezili-18. Wadlala indima ekwakhekeni kweKhomishoni kaZwelonke yokuLondolozwa kweeNdalo, elalibhalwe yonke imithombo yendalo yesizwe.
Nangona wayemthanda iilwanyana zasendle, uRoosevelt wayengumzingeli onomdla. Kwesinye isihlandlo, akazange aphumelele ngexesha lokuzingela ibhere. Ukuze amncede, amasiza akhe athabathe ibhere elidala waza walibopha emthini ukuze aqhube. URovelvelt wenqaba, ethi akayi kudubula isilwanyana ngendlela enjalo. Emva kokuba ibali liye kucacisa, umenzi wezinto zokudlala wayeseqala ukuvelisa iibhere ezifakwe, ezibizwa ngokuba yi "bear bears" emva komongameli.
Ngokwengxenye ngenxa yokuzibophelela kukaRoosevelt kulondolozo, wakhe ungomnye wabameli boobomine abadwebe kwiNtaba yaseRushmore.
Ngomnyaka we-1903, uRoosevelt wathatha iprojekthi eninzi abanye abazange bayiphumelele-ukudala umdaka ophakathi kweCentral America eya kudibanisa i-Atlantic nePacific yolwandle. Isithintelo esikhulu sikaRoosevelt kwakuyinkinga yokufumana amalungelo omhlaba avela eColombia, owawulawula iPanama.
Kwiminyaka emininzi, amaPanamani ayezama ukukhulula eColombia kwaye abe lizwe elizimeleyo. NgoNovemba ka-1903, abantu basePanamani baqalisa ukuvukela, bexhaswa nguMongameli Roosevelt. Wathumela i- USS Nashville kunye nabanye abahamba ngeenqanawa ukuya kunxweme lwePanama ukuba bajonge ngexesha lovuko. Kwiintsuku ezimbalwa, ukuguqulwa kwenguqu kwaphela, kwaye iPanama yayifumane ukuzimela. U-Roosevelt unokwenza isivumelwano kunye nesizwe esandula ukukhululwa. I- Panama Canal , eyimimangaliso yobunjineli, yagqitywa ngo-1914.
Iziganeko ezikhokelela ekwakhiweni kwenzakaliso zenza umzekelo othi: "Thetha ngokukhawuleza kwaye uthwale intonga enkulu-uya kuhamba kude." Xa ezama ukuxoxisana nabantu baseColombia, uRovelvelt wazama ukunyanzelisa, ngokuthumela uncedo lwasemkhosini kumaPanama.
Ixesha le sibini likaRoosevelt
URovelvelt wayekhethwa ngokukhawuleza kwikota yesibini ngo-1904 kodwa wafunga ukuba akayi kufuna ukunyulwa kwakhona emva kokuba agqibe ixesha lakhe. Waqhubeka nokunyusa ukulungiswa kwemithetho, ukukhuthaza uMthetho oPhezulu wokuTya kunye neMichiza noMthetho wokuHlola iMe, owenziwe ngo-1906.
Ehlotyeni ka-1905, uRoosevelt wabamba idiplomats zaseRashiya kunye neJapan e-Portsmouth, eNew Hampshire, ngenzame yokuxoxisana ngoxolo lwentlangano phakathi kweentlanga ezimbini, owaye wafa kwimfazwe ukususela ngoFebruwari 1904. Ngombulelo kwimizamo kaRovelvelt ekwenzeni isivumelwano, I-Russia neJapan zagqitywa ngokusayina iSivumelwano sasePortsmouth ngoSeptemba 1905, ekugqibeleni iMpi yaseRussia-yaseJapan. URoosevelt wanikezwa iNdel Peace Prize ngo-1906 ngenxaxheba yakhe kwingxoxo.
Imfazwe yaseRussia-yaseJapane nayo yabangela ukufuduka kwabantu abangabongiyo baseJapan eSan Francisco. Ibhodi leSikolo laseSan Francisco likhuphe umyalelo oza kubangela abantwana baseJapan ukuba baye ezikolweni ezihlukeneyo. URovelvelt wangenelela, ekholisa ibhodi yesikolo ukuba ihlawule umyalelo wayo, kunye namaJapane ukunciphisa inani labasebenzi abaye bavumela ukufudukela eSan Francisco. Ukholo lwe-1907 lwalubizwa ngokuthi "Isivumelwano seGentlemen."
URovelvelt wahlwaywa ngokunyanzeliswa ngabantu abamnyama ngenxa yezenzo zakhe emva kwesiganeko eBrownsville, eTexas ngoAgasti 1906. Igosa lamasundu amnyama esekelwe kufuphi lalibhekiselelwe kuluhlu lweentambo edolophini. Nangona bekungekho ubungqina bokuba ukubandakanyeka kwamajoni kwaye akukho namnye kubo owake walingwa enkundleni yomthetho, uRovelvelt wabona ukuba onke amajoni angama-167 anikezelwa ukuhlawulelwa. Amadoda ayengamajoni amashumi eminyaka alahlekelwa ziintlobo zawo kunye neempesheni.
Kwimiboniso yaseMerika ngaphambi kokuba ashiye iofisi, uRoosevelt wathumela zonke iimfazwe ezili-16 zaseMerika kwiholide lomhlaba wonke ngoDisemba 1907.Nakuba ukufuduka kwakuyingxabano, "iFleet White Fleet" yayifumene kakuhle kwiintlanga ezininzi.
Ngomnyaka we-1908, uRoosevelt, indoda yelizwi lakhe, wenqabile ukuqhuba ukunyulwa kwakhona. URiphabliki uWilliam Howard Taft, umlandeli wakhe okhethwe ngesandla, wanqoba ukhetho. Ngoxhala olukhulu, uRoosevelt washiya iNdlu ye-White ngoMatshi 1909. Wayeneminyaka engama-50 ubudala.
Omnye usebenzela uMongameli
Emva kokusungulwa kweTaft, uRoosevelt wahamba nge-12 yenyanga e-Afrika, waza wabuyela eYurophu nomkakhe. Emva kokubuyela e-US ngoJuni 1910, uRoosevelt wafumanisa ukuba akavumelani nemigaqo eminingi yeTaft. Wazisola ukuba akazange asebenzele ukunyulwa kwakhona ngo-1908.
NgoJanuwari 1912, uRoosevelt wayegqibile ekubeni uya kuqhuba umongameli, kwaye waqalisa lakhe iqela lokutyunjwa kweRiphabhulikhi. Xa iTaft yaphinda iphakanyiswe yiPublic Republic, ke, i-Roosevelt idakisayo yayenqaba ukuyeka. Wabumba iqela eliqhubela phambili, elibizwa nangokuthi "I-Bull Moose Party," ebizwa ngokuba ngumsindo kaRoosevelt ngelixesha "intetho" efana 'nenjengeenkunzi zeenkomo.' U-Theodore Roosevelt wagijimela njengomviwa weqela ngokuchasene neTaft kunye noMtshutshisi weDemocratic Woodrow Wilson .
Ngethuba linye inkulumo yentetho, uRoosevelt wadutshulwa esifubeni, esondeza inxeba encinane. Wayefuna ukugqiba intetho yakhe yexesha elide ngaphambi kokufuna unyango.
Akukho Taft okanye uRoosevelt wayeya kubamba ekupheleni. Ngenxa yokuba ivoti yamaRiphabhliki yahlukana phakathi kwabo, uWilson waphuma njengomlindi.
Wade ehamba phambili, uRoosevelt waqalisa ukuhambela eMzantsi Melika kunye nendodana yakhe uKermit kunye neqela labahloli-mhlaba ngo-1913. Uhambo olubuhlungu oluya eMlambo we-Doubt eBrazil luye lwabiza u-Roosevelt ubomi bakhe. Wayefumana i-yellow fever kwaye wabuhlungu kakhulu emlenzeni; ngenxa yoko, kwakufuneka aqhutywe ehlathini ngenxa enkulu yoluhambo. URovelvelt wabuyela ekhaya umntu otshintshileyo, unobuncwane kwaye ungcini kunokuba ngaphambili. Akazange aphinde awanandipha imeko yakhe yangaphambili yempilo.
Emuva, uRoosevelt wamgxeka uMongameli uWilson ngemigaqo yakhe yokungathathi hlangothi ngexesha leMfazwe Yehlabathi yokuqala . Xa uWilson ekugqibeleni wachaza imfazwe eJamani ngo-Ephreli 1917, bonke oonyana abane baRovelvelt bazinikela ukukhonza. (URovelvelt wanikezela ukuba akhonze, kodwa isipho sakhe sayeka ngokwenene.) NgoJulayi 1918, unyana wakhe omncinci u-Quentin wabulawa xa idiza lakhe lidutshulwa ngamaJamani. Ukulahlekelwa okukhulu kwavela ku-Roosevelt kwiminyaka engaphezu kwehambo lwakhe elibi ukuya eBrazil.
Kwiminyaka yokugqibela, uRoosevelt wacinga ukuphinda abuyele kumongameli ngowe-1920, ekufumaneni inkxaso eninzi evela kumaRiphabhuliki aqhubela phambili. Kodwa akazange abe nethuba lokuqhuba. URovelvelt wafa ebuthongweni bakhe bokubhikisana ngoJanuwari 6, 1919 eneminyaka engama-60.
Ziziphi izinto ezingekho ngqo?
Indlela efanelekileyo yokuphucula i-Singing